Iron oxide pigment Vagadziri & Vatengesi - China Iron oxide pigment Fekitori
Iron oxide girini 5605/835
simbi oxide tsvuku 110/120/130 / ...
Chitarisiko: orenji-tsvuku kune yepepuru-tsvuku trigonal upfu. Zvese zvakasikwa uye zvakagadzirwa. Iyo yakasikwa inonzi Saffron uye ine huwandu hwehukama hwe55.25. UPENYU 0.4 ~ 20um. Melting Point 1565. Kana yapiswa, okisijeni inosunungurwa uye inogona kudzikiswa kuita iron nehydrogen uye-carbon dioxide. Insoluble mumvura, inogadziriswa mune hydrochloric acid, sulfuric acid, yakanyungudika zvishoma mu nitric acid uye mbiriso. Iyo ine yakanakisa mwenje kuramba, yakanyanya tembiricha kuramba, acid kusagadzikana, Alkali kuramba uye ngura kuramba. Kupararira kwakanaka, kupenda kwakasimba uye simba rekuvanza, hapana kukwana kwemafuta uye kukwana kwemvura. Kwete-chepfu. Iyo yakanyanya kubvumidzwa kusangana mukati memhepo ndeye 5 mg / M 3.
iron oxide yero yero pfumbi.Relative arambe achirema 2.44 ~ 3.60. KUZZIVISIRA ZVIMWE 350 ~ 400 ° C Insoluble mumvura, doro, soluble muasidhi. Fine poda, ndiyo kristaro yesimbi oxide hydrate. Kupenda simba, kuvhara simba, kuramba kwechiedza, kuramba asidi, Alkali kuramba, kupisa kupisa kwakanaka. Inopfuura 150 ° C, mvura yekristaro inoputsika uye inotsvuka.
Chiedza Chijeka kune girini yakasviba. KUWANIKWA: 5.21. Nzvimbo yekunyungudika: 2,266 degrees. Boiling Point: zviuru zvina. Nesimbi kubwinya, nemagineti, simba kuvanda simba, mukuru tembiricha nemishonga, Sun Nemishonga, insoluble mumvura, insoluble mu asidhi, yakadzikama mudenga, kuti mukuru wevasungwa acid uye alkali uye nesarufa dioxide gasi haina zvazvinoita, pamwe chakanakisisa kunoshamisa pigment mhando uye nekukurumidza.
Rima Bhuruu kana yakajeka poda yebhuruu, yakajeka ruvara, yakasimba coloring, kuviga simba zvishoma zvakanyanya. Farinaceous yakaoma. Iyo iron oxide yebhuruu ine yakakwira coloring simba, yakanaka mwenje kuramba, yakashata alkali kuramba uye yakanyanya kupisa kupisa
Iron Orange yakavhenganiswa chigadzirwa chakagadzirwa nesimbi oxide tsvuku uye iron oxide yero yakavhenganiswa, ine yakanaka pigment zvivakwa, senge yekupenda simba, kuviga simba kwakanyanya kwazvo. Nekunaka kwemamiriro ekunze, yakajeka ruvara uye zvichingodaro.
Iron oxide grey rudzi rweiyo inorganic pigment yakasanganiswa neyekuwedzera kubva pachiedza chena kusvika kune rima grey. Iyo ine yakanakisa panyama uye makemikari zvivakwa. Iine simba rekufukidza rakasimba, rakakwirira simba rekutara, rakapfava ruvara, kugadzikana kuita, uye isiri-chepfu. Iyo yakasvibirira nharaunda kudzivirira pigment; iri alkali inodzivirira, yakagadzikana kune isina kusimba acid uye inodzikisa asidhi, uye ine yakajeka mwenje nemamiriro ekunze kusagadzikana, uye haina insoluble mumvura.
Poda yakasviba. Insoluble mumvura, doro, ether, soluble mune inopisa yakasimba asidi. Yakakwira tinting uye yekuvanza simba. Chiedza chakanaka uye Alkali Resistance. Anhydrous permeability uye mafuta kubvumidzwa. Ruvara nemaitiro akasiyana, pane yero Brown, Tsvuku Brown, Nhema Brown uye zvichingodaro.